Amaloota makalluu qindeessa.
Amaloota halluu makalluu qindeessi.
Gurraachaa & Adii
Gaaddiddeessuu mul'isi ykn dhoksi.
Makalluu fi Gaaddidduu
Dirqaalee makallicha nagarsiisuuf qindeessi.
Makallicha siiqqee wanta Y hiikuuf duraa duuba qabduuwwanii cuqaasi.
Waca muraasa yeroo makalluu wanta 3D tti fayyadamtu mul'achuu danda'u gingilcha.
Title is: Makalluuwwwan